Global Voices teny Malagasy · 6 Aogositra 2017
06 Aogositra 2017
Tantara tamin'ny 06 Aogositra 2017
Azia Atsinanana06 Aogositra 2017
Tsy misy zavatra ratsy indrindra ho an'ny bilaogera Indoneziana indrindra manodidina ny fiatombohan'ny taona, afa-tsy ny "fialan'ny" aterineto tampoka vetivety.
Indonezia06 Aogositra 2017
Ho setrin'ny Fihovitrovitry ny tany tao Java tamin'ny 27 May 2006, nametraka ny Java Quake Help Wiki ny World Wide Help Group ary hatramin'ny nametrahana izany tao anatin'ny 24 ora, mandrindra ny hetsika fanampiana miaraka amin'ireo sampan-draharaha lehibe mpanome fanampiana sy ireo ekipa mpamonjy voina eny ifotony ry zareo.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana06 Aogositra 2017
Indonezia: Fanampiana Manoloana Ny Horohorontany
Nametraka ny Java Quake Help Wiki (Fanampiana manoloana ny Horohorontany) ny ekipa World Wide Help (Fanampiana Manerantany). Mitady mpilatsaka an-tsitrapo antserasera ny ekipa mba hanampy amin'ny lahatsoratra sy fandikàna izany ao amin'ny wiki ary koa manampy amin'ny fanapariahana ny teny momba ny wiki.
Repoblika Demaokratikan'i Kongo: Ady Miantraika Amin'ny Ezaka Fiarovana Ny Rajako (Gorila)
Tsy ampoizina tanteraka ny toe-javatra ao amin'ny Valam-pirenena Virunga ao Kongo. Mihitatra ao amin'ny toerana onenan'ny Rajako arovana ao amin'ny tendrombohitr'i Virunga, toerana fehezin'ireo mpikomy ankehitriny ny ady ao Kongo.
Macao : Lasa any amin'ny Fampandrosoana
Makaô (Shina)06 Aogositra 2017
Casino lehibe indrindra manerantany ny Venetian Macau Resort, izay nitentina 2.4 miliara dolara, ary nisokatra tamin'ny 28 Aogositra lasa teo.
Hatramin'ny Jona 2017, dimy ireo mpikambana avy amin'ny mpampita vaovao no nofonjain'ny fanjakàna.
Bangladesh06 Aogositra 2017
Nandrasana fatratra izao vanim-potoana izao ho an'ireo Bengali manerana izao tontolo izao. Izay fotoana hanaovam-bavaka, ny fanasana sy ny fifadian-kanina. Tsy mahagaga noho izany, raha miresaka momba ny fivavahana, ny fomba fanao isan-karazany, ny dikany sy ny fihetseham-po manoloana izany ireo bilaogera Bangali.